ခွဲခွာသူအတွက် နုတ်ဆက်စကား | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ခွဲခွာသူအတွက် နုတ်ဆက်စကား	Posted by mm thinker on April 4, 2008
Posted in: Experience, IT & Blogging.	Tagged: Blogging.	Leaveacomment
ကျနော်အရှိန်ရလာစဉ် သူနှင့် စိန်မျောက်မျောက်တို့က နုတ်ဆက်လေပြီ။ အဆက်အသွယ်မရနိုင်တဲ့ ဝေးရာဆီ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ထွက်ခွာသွားသလို ခံစားမိသည်။ သူတို့ ဒိုမိန်းစ၀ယ်စဉ်က ဈေးချိုချိုနှင့်ရလိုက်ပုံ၊ နောက်နှစ်ထပ်ယူရင် ငွေထပ်ပေးရမှာ စသဖြင့် ဘိုးတော်ကြီးတို့ ပို့စ်ရေးဖူးတာ သတိရသေးသည်။ တိုက်ဆိုက်စွာ ကျနော်သည်လည်း Blogging အချိန်ကို လျှော့ချတော့မည်ဟု စိတ်ကူးနေချိန်လည်းဖြစ်သည်။ စာကောင်းကောင်း၊ နည်းနည်းကို ကျဲကျဲပဲတင်တော့မည်ဟု တွေးနေချိန်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းသည် ကျနော်တို့က ရှာဖွေပျော်မွေ့နေသော ယာယီကမ္ဘာဖြစ်ပါသည်။ နုတ်ဆက်ထွက်ခွာသူတွေရော၊ နုတ်မဆက်ဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားသူတွေရော မြင်နေရသည်။ အသစ်အသစ်တွေလည်း လန်းဆန်းဖူးပွင့်နေတာ မြင်ရသည်။ ကျနော်ပြောထားသလို ဒီကမ္ဘာသည် ကျနော်တို့၏ ယာယီ Community သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်သည်လည်း ဘယ်အချိန်ခွဲခွာသွားရမည်ဟူ၍ကား မသိနိုင်သေး။ ၀င်သူဝင်၊ ထွက်သူထွက်၊ ခံစားချက်သန့်သန့်၊ ရိုးသားမှုသက်သက်၊ အတ္တအဖြူဖြင့် ကျနော်တို့ ခင်မင်ဖူးပြီ၊ ကူးလူးဆက်ဆံကြဖူးပြီ၊ စိတ်ပြေစရာတို့ရှိခဲ့ဖူးပြီ။ ဤသည်ပင် ကျနော်တို့အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော၊ သို့သော် မမြဲခြင်းအနိစ္စလည်းရှိသော ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆင်ခြင်မိပါသည်။
← Existence Magazine – Vol.1, Issue.2 – Download	ဖွဲ့တည်ရာနှင့် သောင်းပြောင်းထွေလာ →	0 comments on “ခွဲခွာသူအတွက် နုတ်ဆက်စကား”
boedawgyi on April 5, 2008 at 1:52 pm said:
Reply	ShwunMi_ရွှန်းမီ on April 5, 2008 at 2:24 pm said: